ယူချင်ဦးဟဲ့ ………….. ခွင့် (၁) ရက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယူချင်ဦးဟဲ့ ………….. ခွင့် (၁) ရက်
ယူချင်ဦးဟဲ့ ………….. ခွင့် (၁) ရက်
Posted by နွယ်ပင် on Jul 2, 2011 in Creative Writing, Jobs & Careers, Short Story | 14 comments
မနေ့ကနေမကောင်းလို့ အလုပ်မှာခွင့်တစ်ရက်ယူဖို့ ခွင့်တိုင်ဖြစ်တယ် အိမ်ကနေပဲ အလုပ်ကလူတွေကို လှမ်းပြီးဖုန်းဆက်ပြောတော့ ” သူငယ်ချင်းတွေက အေးဆေးပါ နင့် အလုပ်တွေလုပ်ထားပေးမယ်လို့ပြောတယ် ဒါပေမယ့် ဘောစိ(သူဌေး) ဆီကိုတော့ ဖုန်းဆက်ပြီး ခွင့်တိုင်လိုက်ဦးတဲ့ သိတယ်မဟုတ်လား ဘောစိက ခွင့်ဆိုရင် သူ့မသိရင်ပြောနေဦးမယ်လို့ ” ပြောတာနဲ့ ဖုန်းဆက်လိုက်ရတယ် ။ တကယ်ပါ နွယ်ပင်တို့ နေမကောင်းဖြစ်တာတောင် ပျောက်ပြီး အလုပ်သွားချင်စိတ်ပေါ်လာအောင်ကိုပဲ ဖုန်းခေါ်လိုက်ရတာ တစ်ညောင်းပဲ မကြာဘူးဆို 45 မိနစ် အသာလေးပဲ ဖုန်းလဲရသွားရော ” အစ်ကို ညီမနေမကောင်းလို့ ခွင့်တစ်ရက်လောက်ယူချင်လို့ပါလို့ ပြောတော့ …..သူက ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့ ……ခေါင်းမူးနေလို့ ဆေးခန်းသွားမလို့ပါဆိုတော့ …… တကယ်လို့ ဆေးခန်းပြပြီးလို့သက်သာရင် အလုပ်ကိုပြန်လာပါတယ်တဲ့ လှဲနေစရာမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လဲ အလုပ်ကိုပြန်လာပါတဲ့ ” အဲတာနဲ့ ဖုန်းတစ်ညောင်းထိုင်ခေါ်ရတာပဲ အဖတ်တင်တယ် (123း0) လောက်ကျတော့ ကုပ်ကုပ်နဲ့ အလုပ်ကိုပြန်လာရတာပေါ့ အလုပ်က သူငယ်ချင်းတွေက ” ဟယ် …နေမကောင်းဘူးဆိုဘာညာနဲ့ပြောတော့ ….သူတို့ကိုဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် လှည့်ပြီးမဲလိုက်သေးတယ် အံမယ်ငါ အိပ်ယာထဲ လဲနေလို့လား လာနိုင်လို့ပြန်လာတာပေါ့ဆိုတော့ ……” အကြောင်းသိတဲ့ သူငယ်ချင်းက “အံမယ် …. ဘောစီက နေ့ခင်းပြန်လာလို့ ပြောလို့ လာတာမဟုတ်လားတဲ့ ” ဟုတ်နေလို့ ငြိမ်နေလိုက်ရတယ် အမှန်က နွယ်ပင်တို့ ဘောစီက တစ်ခါနွယ်ပင် ဖတ်ဖူးတဲ့ ဟာသထဲကလိုဖြစ်နေတာလေ အဲဒီဟာသလေးက ………..
သူဌေး-— “ဘာ… ခွင့်တစ်ရက်ယူချင်တယ် ဟုတ်လား?
တစ်နှစ်မှာ(၃၆၅)ရက် အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ တစ်နှစ်မှာ(၅၂)ပတ်ရှိတဲ့အထဲ တစ်ပတ်မှာ(၂)ရက် မင်းအနားရတော့ (၂၆၁)ရက်ပဲ မင်းအလုပ်ချိန်ကျန်တယ်။ တစ်ရက်မှာ (၁၆)နာရီ မင်းအလုပ်မလုပ်ဘူး။ တစ်ရက်(၁၆)နာရီနဲ့ တစ်နှစ်မှာ ရက်(၁၇ဝ)နုတ်တော့ မင်းအလုပ်ချိန်က (၉၁)ရက်ပဲကျန်တယ်။ တစ်ရက်ကို မိနစ်(၃ဝ) မင်းကော်ဖီသောက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နှစ်မှာ(၂၃)ရက်ရှိတော့ အလုပ်လုပ်ချိန်က (၆၈)ရက်ပဲကျန်တယ်။ တစ်ရက်မှာ(၁)နာရီ မင်းထမင်းစားတယ်။ ဒါနဲ့(၄၆)ရက်နုတ်လိုက်တော့ မင်းအလုပ်ချိန်က (၂၂)ရက်ပဲကျန်တယ်။ တစ်နှစ်မှာ (၂)ရက်လောက် မင်း ဆေးခွင့်ယူသေးတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ မင်းအလုပ်ချိန်က (၂ဝ)ရက်ပဲကျန်တယ်။ တစ်နှစ်မှာ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ၊ ရုံးပိတ်ရက်တွေက (၅)ရက်လောက်ရှိတယ်။ ဒါနဲ့ အလုပ်ချိန်က (၁၅)ရက်ပဲကျန်တယ်။ ကုမ္ပဏီက တစ်နှစ်မှာခွင့်(၁၄)ရက် သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မင်းအလုပ်ချိန်က (၁)ရက်ပဲကျန်တယ်။ ဒါနဲ့များ မင်းက ခွင့်တစ်ရက်ယူချင်သေးတယ်။ ဟုတ်လား?”
ဟုတ်တယ်နော် အဲလိုသာ သူဌေးကပြောခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အခု သူ့ခမျာငါ့ကို နေ့ဝက်ကြီးတောင် ပေးနားထားတာပဲ ဆိုပြီး ကျေးဇူတွေထပ်တင်နေရပြန်ရော။
ပေ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် နွယ် ရယ် ။ ဟီဟိ
ဟာသလေးက အတွေးတော်တော်ကောင်းတာပဲ။ သဌေးတွေဖတ်များဖတ်မိလို့ကတော့ ရင်လေးစရာပ
အမှန်တကယ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာက အလုပ်ရှင်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်း ဟုတ်သလို၊အလုပ်သမားဘက်က ကြည့်ပြန့်တော့လည်း ကျမ်းမာရေးအတွက်ဟုတ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကိုခွင့်တစ်ရက် အလုပ်သမားတစ်ရာရှိတဲ့သူဌေးဆိုရင် သူ့အတွက်အများကြီးနှစ်နာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မိမိတစ်နေ့မှာ ကိုယ်တိုင်အလုပ်ရှင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အလုပ်သမားကို ခွင့်မပေးချင်ဘူး၊ ခွင့်ပေးရမှာ နစ်နာတယ်ထင်တယ် ဆိုရင် အလုပ်ရှင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပဲ ပြောရမှာပဲ။ ခွင့် ဆိုတာ အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး တရပ်ပါပဲ။ အလုပ်သမားတယောက်ဟာ နှစ်ပတ်လည်ခွင့်၊ ဆေးခွင့်၊ မင်္ဂလာဆောင်ခွင့်၊ မီးဖွားခွင့်၊ ဆွေမျိုး သေဆုံးတဲ့အခါယူတဲ့ ခွင့် စတာတွေကို လစာအပြည့်နဲ့ ခံစားခွင့်ရှိရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေမှ မပေးချင်ရင် အလုပ်ရှင်မလုပ်ပါနဲ့။
တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေးတဲ့ခွင့်ရက်က နည်းပါးလွန်းပါတယ်။ တနှစ်မှာ ၆ ရက် ကနေ ၁၂ ရက် အများဆုံးပဲရှိပါတယ်။ သူများတွေဆီမှာ ၃ ပတ်ကနေ ၅ ပတ်ပေးနေကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်ရှင် အမည်ခံထားသူများရဲ့ အလုပ်သမား၊ ၀န်ထမ်းပေါ်ထားတဲ့ အတွေးအခေါ်များဟာ ၁၃ ရာစုကနေ ၁၉ ရာစုက ပဒေသရာဇ်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်သာသာပဲရှိပါတယ်။ အလုပ်ရှင်က မရေမတွက်နိုင်အောင် သို့ ရာခိုင်နှုန်း ၉၅ လောက်ယူပြီး ၀န်ထမ်းတွေလစာအတွက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ပေးတာပါ။ ဒါတွေက ပဒေသရာဇ်သခင် နဲ့ ကျွန် ဆက်ဆံရေးပါပဲ။ အခုလဲ ဒီအတိုင်းကျင့်သုံးနေတာပါပဲ။ မ၀ရေစာပေးထားပြီး နားချိန်မပေးချင် ကျွဲလိုနွားလိုခိုင်းပါတယ်။ ပြီးလျှင် သူတို့က မတန်တဆပေးတယ် ပြောပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ချိန်က တပတ် ၆ရက်ပါ။ ပိတ်ရက် မပေးတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အရည်အချင်း လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကတော့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမှီလိုချင်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရင်နှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဒလဟောဝင်လာရင် ကိုယ့်ဆီက ရှိသမျှကို ငွေ၊ အခွင့်အရေးပိုပေးပြီး အကုန်ဝါးမြိုသွားနိုင်ပါတယ်။
ဆိုရရင် နိုင်ငံမတိုးတက်သေးတာ ဘာကြောင့် ညာကြောင့် ပြောနေကြသူများ မိမိကိုယ်တိုင်ကရော အလုပ်သမားများအား အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ပေးချင်ပါရဲ့လား။ စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာနိုင်ပါပြီလား ဆန်းစစ်သင့်သည်ဟုထင်ပါသည်။
နောက်တခါ လုပ်ပျက်ခါနီး ဖုန်းမဆက်ပဲ ပျက်လိုက်တော့.. ဖုန်းဆက်ဖို့လောက်အောင်ကို အားမရှိတော့တာ လို့သာ အကြောင်းပြလိုက်ပေတော့။
၀ိရောဓိအသွင်ဆောင်နေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ (အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး) ခွင့်ယူတတ်တဲ့လူနဲ့၊ မတတ်သာမှ (မဖြစ်မနေကိစ္စ အရေးကြီးမှ) ခွင့်ယူတတ်တဲ့လူမှာ အလုပ်ရှင်ကလည်း အခြေအနေကြည့်ပြီး ခွင့်ပေးသင့် မပေးသင့် ချင့်ချိန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ လူမှုရေးလည်း နားမလည်၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ခွင့်မပေးချင်တဲ့ အလုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့ သူ့ဆီမှာ ဆက်မလုပ်တော့နဲ့ပေ့ါ။
မနွယ် ဖုန်း ထဲ မှာ ဆော့ဖ်ဝဲ သွင်းထားလိုက်ပေါ့ ။ ကိုယ်မဖြေချင်တဲ့ ဖုန်းအတွက် ။ လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသော မိန်းမချောလေး မှာ သူ့ ချစ်ကိုကို နှင့် meeting နေပါသဖြင့် ခေါ်ဆိုလို့ မရနိုင်ပါရှင် ။
ထပ်တိုးမယ် မင်းတို့နဲ့နိုင်မလား မနိုင်ရင် လူထပ်ထည့်မယ်။
မင်းတို့နိုင်ရင် မင်းတို့တိုးလုပ် အဲဒီလူတွက် မင်းတို့ရမယ်။
တိုတိုပြောတာနှော်…. အဲဒီလို လုပ်ရင် တကယ်လုပ်ယ နားရင်တကယ်နား တဲ့
လူပဲ စက်ရုပ်မဟုတ်တော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ နေမကောင်းဖြစ်တာ အဆန်းလား
တော်ရုံတန်ရုံ နေမကောင်းဖြစ်တာလောက်ဆိုရင် ခွင်တိုင်ရမှာကြောက်လို့ သွားဖြစ်တာများပါတယ်
တကယ်လုပ်ရင်တကယ်နားဆိုတော့ ဟုတ်ပ နွယ်ပင်ကပဲ တကယ်မလုပ်သလိုလိုနဲ့
တကယ်လဲ လုပ်ရပါတယ် တကယ်နားချင်ရင်သာ မနားရတာပါ ..
အဲလိုဆိုရင်ရော ဘယ်လိုပြောရမှာပါလဲ Yan Shin ရေ ….
yan shin ပြောမှပဲ တကယ်လုပ်ရင် တကယ်နားဆိုတော့ နွယ်လေးက ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာပါလိမ့်….
ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်… အလုပ်နားပါတယ်ဆိုမှ တချိန်လုံးဖုန်းဆက်ပြီး မေးနေတာက တမျိုး … တပိုင်းလာဆင်းပါဦး … နေ့တ၀က်လာဆင်းပါဦး … ခဏလာဆင်းပါဦးတွေ လုပ်နေတယ် … ။ ဒီကြားထဲ အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အခါမျိုး ဖုန်းဆက်ပြီး အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ရအောင် ခဏခဏ နှောက်ယှက်တယ်… ။
ရုံးပျက်ချင်လို့ ကတော့ … ခွင့်ယူချင်ကြောင်း တခြားလူက တဆင့် ဖုန်းဆက်ခိုင်တယ်… ။ ဒါမှမဟုတ် … ဂျီအမ်ဆီ SMS ပို့လိုက်တယ်… စကားပြောဖို့တောင် အားမရှိဘူး ဘာညာပေါ့ … ။ ပြီးတော့ … ဖုန်းပိတ်ပြီး အိပ်နေလိုက်တယ်… ။ နောက်နေ့မှ အားမသွင်းမိလို့ ဘတ်ထရီကုန်နေတာ မသိလိုက်ဘူးပေါ့ … ။
အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ပေးခဲ့တာပဲ …နားချိန်လေးတော့ ပေးသင့်တာပေါ့လေ … ။
ခွင့်ဆိုလို့ သဘောကျတာလေးတစ်ခု ပြောပြချင်တာ
နော်ဝေးမှာ ကလေးမီးဖွားရင် မိခင်ခွင့်ရတယ် (ဒါက နိုင်ငံတိုင်းလို့ ပြောလို့ရတာပေါ့)
အမေရုံးပြန်တက်ရင် အဖေကို လစာနဲ့ ခွင့်ထပ်ပေးတယ် ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလိုက်သလဲ
တို့တော့ ဘာဇာတာပါလဲ မသိဘူး .. အခု လုပ်နေတာ volunteer ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ မကပ်ဖြစ်ပဲ အလုပ်မှာ အချိန်ကုန်တာ များတယ် ..